Golaha Dhaqanka abwaan Cabdulle Raage Taraawiil
Talaado, September 02, 2014 (HOL) — Shirweyne looga dhawaaqa gole dhaqan oo loogu magac-daray abwaan Cabdulle Raage Taraawiil ayaa lagu qabtay magaalada Kartinholm ee dalka Sweden.
Xafladda ayaa waxaa ka qaybgalay laashimiin, fannaaniin iyo abwaan si aad ah u qiimeeya suugaanta Soomaalida, iyadoo intii ay xafladdu socotay ay ka qaadday heeso afka Soomaali gabar Swedish ah oo u soo labisatay sida ay u labistaan haweenka Soomaaliyeed.
"Waxaa maanta sharaf inoo ah inaan halkan ku qabanno munaasabad aan ku dhisnayso golaha dhaqanka Abwaan Cabdulle Raage Taraawiil, waxaana kasoo qaybgalay abwaanno, qorayaal iyo dad ajaanib ah," ayuu yiri Gacal.
“Maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan isugu imaanno kulankan oo aan ku doonayno inaan uga hirgelinno Sweden gole aan ugu magacdarayno mid ka mid ah abwaaniintii waaweyneyd ee Soomaaliyeed, Allaha u naxariisteen, Abwaan Cabdulle Raage Taraawiil, waxaana Soomaalida kula talinayaa inay mar walba kala saaraan dhaqanka iyo siyaasadda,” ayuu yiri C/nuur Ciise.
Qoraaga Soomaaliyeed ee C/casiis "Xildhiban" oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in golaha si KMG ah loogu doortay guddoomiye, Xuseen Madoobe isagoo sheegay inay ugu hambalyeynayaan xilka loo magacaabay.